HomeDUNIDAAasiya98 IranShil tareen oo ka dhacay Iran, 4 dhintay 35 Dhaawacmay
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 98 Iran, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD 0
shil tareen ku dhaawacmay Ireland
Tareenka rakaabka ee Zahedan-Tehran ee Iran ayaa xumaaday. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintey halka 35 qof ay ku dhaawacmeen shilka.
Diyaaradaha Iran ee Sistan iyo Balochistan ee ku yaal gobolka Zahedan iyo Başknet Tehran ayaa u dhexeeya tareen rakaab ah oo la jaray. Sida ay sheegayaan wararka hordhaca ah, 4 qof ayaa ku dhintey halka 35 qof ay ku dhaawacmeen shilka.
Agaasimaha guud ee qalalaasaha gobolka Desk Abdulrahman Sehnvazi ayaa sheegay in tareenka tareenka ku goostay ay sabab u tahay ciidda ku soo ururtay. Şehnvazi wuxuu xaqiijiyay tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay, wuxuuna u diray kooxaha gargaarka, helikobtarro iyo ambalaas gobolka. Hay'adda gargaarka deg-degga ah ee Iiraan ayaa sheegtay in xaaladda dadka dhaawacmay ay culus tahay oo tirada dhimashadu ay sii kordhin karto.
Baaritaan ayaa la bilaabay ka hor shilka.
Shil gaareen Germany: 3 dhintay, 13 dhaawacmay 15 / 04 / 2012 Dadka 3 ayaa ku dhintay shil tareen oo u dhaw magaalada magaalada Offenbach ee Jarmalka maanta ka dib saqda dhexe. Tareenka, oo ka soo degay Frankfurt ilaa Hanau, ayaa jiidhay tareenka tareenka ee ku socda jidka tareenka ee jidka Offenbach Mühlheim. Shilkii, laba qof ayaa lagu dilay tareenka iyo bulldozer. Badbaadada offenbach ayaa ku dhawaaqday in 13 loo qaaday isbitaalka. Intii lagu baarayay shilka, waxaa la ogaaday in daraasadaha shilku dhacay. Guud ahaan rakaabkii 6 ayaa laga helay tareenka u dhexeeya Frankfurt iyo Hanau. Xigasho: Waqtiga
Shil gaari oo ka dhacay Argentina, 3 dhintay ayaa dhintay 100 dhaawacmay 14 / 06 / 2013 Shil tareen oo ka dhacay Argentina: 3 wuxuu ku dhintay shil tareen oo ka dhacay caasimadda Argentine Buenos Aires, iyada oo rakaab badan oo dhaawacmay ka badan 100. 3 ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay caasimadda Argentina, Buenos Aires, iyo in ka badan rakaabkii 100 ayaa la sheegay inay dhaawacmeen. Masuuliyiinta, saacadaha subax ee aagga Moron ee tareenka magaalooyinka 2 ayaa tareen u dhexeeya xarun 2 lagu sheegay in tareen kale. Shilkii ka dib, rakaabkii tareenka ee tareenada ka yimid xaruntooda gaarka ah iyo wargeliyay mas'uuliyiinta. Rakaabka ku xayiran boodhka ayaa la badbaadiyey kooxo goobid iyo samatabbixin ah oo loo diray goobta. Ruben Sobrero, hogaamiyaha Union Railroad, waa 6 oo ah tareenka laba-tareenka ah ee tareenada
Shil gaari oo ka dhacay Argentina, 3 ayaa geeriyooday by 100 15 / 06 / 2013 Shil tareen ee Argentina, 3 xnumx'ler dhintay ku dhaawacmay shil tareen ee caasimada Argentina ee Buenos Aires, dadka 100 ayaa ku dhintay, in ka badan 3 rakaab ah ayaa la soo sheegay ay ku dhaawacmeen. Masuuliyiinta, saacadaha subax ee aagga Moron ee tareenka magaalooyinka 100 ayaa tareen u dhexeeya xarun 2 lagu sheegay in tareen kale. Shilkii ka dib, rakaabkii tareenka ee tareenada ka yimid xaruntooda gaarka ah iyo wargeliyay mas'uuliyiinta. Rakaabka ku xayiran boodhka ayaa la badbaadiyey kooxo goobid iyo samatabbixin ah oo loo diray goobta. Hogaamiyaha Ururka Railway Ruben Sobrero, laba-story tareenada magaalada hareeraheeda ah in la isticmaalo waxaa ka mid ah bilood 2, dhowr maalmood ka hor ayuu yiri si ay u bilaabaan shukaansi mar kale sababtoo ah cufnaanta waqtiga. Front ...
6 oo dhintay, 200 ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay France (Video) 13 / 07 / 2013 6 ayaa ku dhintay France, 200 ku dhaawacantay: Tareen tareemo ah oo laga afduubay degmada Essonne ee koonfurta Paris, France. Tareenada rakaabka 6 waxay ka tageen Paris ilaa Limoges iyo 370 ayaa ku dhaawacmay 22 culus. Paris Austerlitz tareen ka tareen gudbayo saldhigga, kuwaas oo Waqtiga maxaliga ah ee tirada Teoz 60, 3657: 17 loo qaadan meel ka mid ah joogsiyada on the saldhigga Brétigny-Suur-Orge, la gaadhi tareen gaadhi 14 7 marin habaabiyay. 4 waxaa lagu soo rogay cadaadis sare iyadoo ay ka soo dhacaan jaranjaro ka soo jeeda baabuurta rakaabka. Qaar ka mid ah gaadhiga ayaa ka gudbi kara meelihii mitirka 370 ee wadada isku midka ah
On goobta shil tareen ee 1 dhintay, 2 dhaawacmay 21 / 08 / 2013 Tareenka 1 dhintay, 2 dhaawacmay: hooyada iyo caruurteeda ayaa isku dayaya inay ka gudbaan biriijka jidka tareenka ee tareenka. Hooyada iyo caruurtu waxay isku dayeen inay laba caruur ah ku dhaafaan buundada tareenka ee degmada Germencik ee Aydın. Hooyadii hal bil ee hooyadeed, hooyadeed ayaa ku dhimatay dhabtii, hooyadeed iyo gabadh kale ayaa ku dhaawacmay. Shilka ayaa ka dhacay xaafadaha 4 ee buundada tareemada ee gobolka bartamaha Germencik. waqti Nazilli-Soke tareen rakaab ah, ka buundada tareenka oo isku dayaya in ay ka gudbaan Şükriye Duru (18.00) iyo waxa uu ku yaalaa soo socda si Edanur (30) iyo 5 bilood ilmaha jir bixi dhacay Ecrin Duru. Iyadoo ay sabab u tahay saameynta 4 bishiiba Ecrin, tareenada gawaarida tareenka
6 oo dhintay, 200 ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay France (Video)
On goobta shil tareen ee 1 dhintay, 2 dhaawacmay
Diyaarad Helicopter ah oo ku Dhintay Masar: 24 oo dhintay, 28 dhaawacmay (Video)
7 oo geeriyootay, 12 oo dhaawacmay (Video)
Shil tareen oo ka dhacay 11 oo ku dhaawacmay 42